ဗဟုသုတ – The Only Way To Go!
ကျနော်တို့တတွေဟာ ခုလို အင်တာနက်မှာ စာတွေလိုက်ဖတ်ဖြစ်ကြပါတယ် ။ အားလုံးအနေနဲ့ စာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေကို လိုချင်လို့ လိုက်ဖတ်တာလဲ ဆိုပြီး အတွေးခေါင်မိပါတယ် .။ ဥပမာ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အနေနဲ့ အတွေးအမြင်သစ်ကို လိုချင်လို့လား ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်ခုခု ရချင်လို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးများနဲ့ ဖတ်ဖြစ်ကြပါတယ် ။ အများအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်က စာတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ လက်ခံလို့ရတဲ့ အတွေးအမြင် ရှိသလို လက်ခံလို့မရတဲ့ အတွေးအမြင်လည်း ရှိတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ရှိရှိသမျှ စာတွေကို လိုက်ဖတ်ရာမှာ သေချာ သတိထား သိရှိဖို့ အသိပေးချင်မိပါတယ် ။ စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါ စာဖတ်သူဟာ သူ့ ပင်ကိုယ် စဉ်းစားဥာဏ်ကို အခြေပြုပြီး ဖတ်လိုက်တဲ့ အတွေးအမြင်ကို … More စာဖတ်တတ်ပါစေ
3 Comments စာဖတ်တတ်ပါစေ
Internet အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခုမှစသုံးမဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ပြောပြချင်ပါတယ် ..ဒါကြောင့် Internet ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတပ်လိုက်တာပါ. သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ International နဲ့ net ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ .. international ဆိုတာက နိုင်ငံတကာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး net ဆိုတာက ကွန်ရက် ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ် .. ဒီနှစ်ခု ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံတကာကွန်ရက် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်ပါ… အစကတော့ ကျနော်လည်း သိပ်မသိဘူးဗျ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို နောက်မှ ပြန်တွေးကြည့်မှ ဒါကိုပြောတာကိုး ဆိုပြီး သိလိုက်တာ … .. ဟုတ်ပြီ အင်တာနက်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင် ပြီးပြီပေါ့ ခေါင်းစဉ်က ကိုက Internet အတွက်ပဲလေ … More Internet
ဒီနှစ် 14 ရက် နိူဝင်ဘာ 2010 မှာ တောင်ကြီး ဘက်ကို ဘုရားဖူးထွက်ဖြစ်ပါတယ် အစကတော့ တောင်ကြီး မြို့ပဲ ထင်မိတာ . နောက်မှ နေရာ တော်တော်စုံသွားတယ် တစ်ခါမှလည်း မရောက်ဖူးဘူး အဲ့ဘက်ကို အရင်ကတော့ သွားမယ်သွားမယ်နဲ့ ကြိမ်းထားတာ ခုနှစ်ဗျာ တကယ်ကိုသွားဖြစ်တာ .. သွားတုံးဓါတ်ပုံ လေးတွေ ရိုက်ဖို့ဆိုပြီး အားခဲထားတာ ရိုက်တော့ ရိုက်ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ပုံထွက်တွေကသိပ်မကောင်းဘူး ဖြစ်နေတာ ခုမှ မကောင်းလည်း အမှတ်တရပဲ ဆိုပြီး ဒီဘလော့ပေါ် ပစ်တင်လိုက်တာ .. တောင်ကြီး မီးပုံပျံပွဲတော်မှာ တော်တော်ပျော်ပါတယ်… မီးကျီလွှတ်တာကို ခုမှ အနီးကပ် မြင်ဖူးတော့တယ်ဗျာ .. တော်တော် ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပါ … အဲ့ဒါ … More တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်
2 Comments တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်
၁။ လူတိုင်း ချစ်တတ်လာလျှင် အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွဲ့ကြ၏. ၂။ အချစ်မရှိလျှင် အမုန်းဆိုတာလည်း ရှိလာမည်မဟုတ်။ ၃။ အချစ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်က အမုန်းတစ်ခုထဲလား မေးချင်မိသည်။ ၄။ အချစ်ဆိုတာ မည်သို့ ခေါ်သနည်း ။ ၅။ အချစ် ဟူသည် နှလုံးသားရဲ့ အသက် ဖြစ်ချေမည်။ အချစ်သည် တစ်ဦးတည်၌ ဖြစ်တည်မည်မဟုတ် အချစ်သည် နှလုံးသားနှစ်ခုအား ကမ္ဘာတစ်ခု တည်ဆောင်ပေး၏ အချစ်သည် လူနှစ်ယောက်အတွက် နွေးထွေးစေ၏ အချစ်ကြောင့် လူနှစ်ယောက် ပြုံးပျော်ကြ၏ အချစ်သည်ပင် နှလုံးသား အသက်အတွက် အောက်ဆီဂျင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် အချစ်၏ အတိမ်အနက်သည် ဆင်းကြည့်မှ သိတတ်သောအရာဖြစ်၏ အချစ်၏ ပုံသဏ္ဍန်သည် မိမိ၏ရင်၌ ခံစားရင်း ဖြစ်ပေါ်၏ အချစ်ကို သက်ရှိဟု ယူဆမည် အကြောင်းမှာ … More အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ထင်ရသော အချစ်
2 Comments အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ထင်ရသော အချစ်
တွေးတောခြင်း (၁) စိတ်တွေ အိပ်မက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော် တွေးမိသလောက် ပြန်ပြောပြတာပါ .. ။ တနေ့ တနေကုန်မောပန်းလို့ အိပ်ရာ မဝင်သေးခင် ဇာတ်ကြမ်းကား တစ်ကားကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ။ တရေးနိုးမှာ သတိထားမှု တခုအတွက် အတွေးတခု ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါကတော့ လူတိုင်းလိုလို ဖြစ်မိမယ်ထင်ပါတယ် ဘယ်လိုလဲဆိုရင် ကျနော်အိပ်မက် မက်တယ် .အိပ်မက်ထဲမှာ ဒါရိုက်တာ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမဲ့ ဇာတ်လိုက်ကတော့ ကျနော်ဖြစ်နေပါတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့ မအိပ်ခင် ကြည့်လိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ အစီအစဉ်တကျ တကယ်ဖြစ်နေသလိုပဲ အိပ်မက် မက်နေမိခဲ့တာ. အဲ့အချိန်မှာ တွေးတောမိတယ် အိပ်မက် မက်နေစဉ် အကြောင်းအရာကို အိပ်ယာထပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အများစုကို မမှတ်မိတော့တာပဲ .. ဒါဘာကြောင့်လဲ .ခုခေတ် … More တွေးတောခြင်း (၁)
Leaveacomment တွေးတောခြင်း (၁)